Hevitra MPANOHARIANA | Febroary 2008
Mila fitandremana ny mamoaka vaovao
2008-02-19 @ 12:50 in Andavanandro
Nahavariana tato ho ato fa be dia be ny famoaham-baovao tsy marim-pototra nefa niely haingana dia haingana tokoa. Nahavariana fa na dia ny fampahalalam-baovao efa ela nihetezana aza dia tratra soa aman-tsara tamin'ny valin'ny baolina diso sy andro diso. Ny fatratra dia maro ihany koa ny haino aman-jery nanambara izay vaovao diso izay.
Ny faharoa indray dia ny momba ny loza voajanahary mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nahoraka dia nahoraka fa nisy olona 9 nianjeran'ny trano tany amin'ny fandraisam-bahiny iray any amin'ny nosy Sainte-Marie. Nisaritaka tanteraka ny filazam-baovao omaly. Nisy nilaza fa maty ireo olona voalaza ireo. Nisy kosa ny nametraka fisalasalana fa tsy mahalala ny tohin'ny raharaha. Ny marina dia tapaka avokoa ny tambajotram-pifandraisana rehetra tany amin'io Nosy io. Dia nanitsy ny tany an-toerana androany atoandro fa tsy nisy namoy ny ainy velively tany amin'iny toerana iny.
Izay ry zareo ny filazana tsotra: mila fitandremana tokoa ny mamoaka vaovao fa manjary manimba ny hasin'ny famoaham-baovao sy ny fitokisan'ny namana rehetra. Tsara ny miala tsiny mazava rehetra tratran'ny tahaka io tranga io fa tsy manafina mangina azy any.